Sonos Arc, raha ny fahaiza-miavaka dia tonga amin'ny endrika bara | Vaovao momba ny gadget
Sonos Arc, rehefa tonga amin'ny endrika bara ny fahatsarana
Herinandro lasa izay, Sonos dia namoaka ady tamin'ny zava-baovao, anisan'izany ny Sonos Arc vaovao, bara fanamafisam-peo izay tonga hisolo ny Sonos Paybar. Eto izahay dia manafoana ny boaty ary nilaza taminay ny fiheveranay voalohany momba ny vokatra, ary tonga izao ny fehin-kevitra farany.
Izahay dia mitondra anao fijerena lalina ny bara fantsona vaovao, Sonos Arc. Mijanona miaraka aminay satria manana horonan-tsary izahay izay anehoanay anao ny fahaizany, ho fanampin'izany dia hifantoka amin'ny antsipiriany rehetra izahay, ny tsara sy ny ratsy indrindra, amin'ny zavatra niainan'ny mpampiasa anay.
Toy ny mahazatra, eo an-tampon'ity lahatsoratra ity dia mamela rohy ho anao izahay mba hahitanao amin'ny horonan-tsary ny fandalinana feno ataonay momba ny Sonos Bar vaovao, raha tianao kosa ny hahafantatra ny fomba fikirakirana azy na ny atin'ny boaty, ao ITY FIAINANA ity Avelanay ho anao tanteraka ny zava-drehetra. Etsy ankilany, raha efa azonao antoka tanteraka, Azonao atao ny mividy Sonos Arc vaovao amin'ny Amazon amin'ny vidiny tsara indrindra ary miaraka amin'ny antoka feno.
1 Volavola: zava-bita mahomby
3 Feo: namoaka ny tongony indray i Sonos
4 Ny sanda fanampiny: Fanamboarana sy fanaingoana
5 Mpanampy virtoaly sy serivisy hafa
6 Ny hevitry ny tonian-dahatsoratra sy ny zavatra niainan'ny mpampiasa
Volavola: zava-bita mahomby
Ho sarotra aminao ny hino izay rehetra ao anatiny rehefa fantatrao ny toetra teknika. Na dia hanaiky aza izahay fa miatrika vokatra mandrefy tsy latsaky ny 1141,7mm lava, 87mm avo ary 115,7mm lalina. Lava dia lava izy io ary manify. Mazava ho azy, tsy adinontsika fa milanja 6,25 kg, mahatsapa haingana ianao raha vantany vao manandrana manala azy amin'ilay boaty ianao.
Ny zava-misy fa ny lanjan'ny vokatra mavesatra dia vaovao tsara amin'ny ankapobeny Sonos Tsy dia maivana loatra ny fitaovan'izy ireo na eo aza ny fananganana polycarbonate azy ireo, fa ny ankamaroan'ny lesoka dia ny metaly anatiny no avo lenta mifantoka amin'ny fandefasana feo hifanaraka.
Ny Sonos Arc dia miasa tsara indrindra eo ambanin'ny fahitalavitra manodidina ny 50 santimetatra, manana boaty polycarbonate boribory boribory boribory boribory boribory (lavaka 76.000 XNUMX amin'ny totaliny) izahay, na dia eo am-potony aza dia manana fotony silika fisaka Manampy ny fahamarinan-toerana izy io ary mamoaka feo madio. Hita amin'ny loko roa: mainty sy fotsy, ity Sonos Arc ity dia manampy amin'ny famolavolana ny marika.
Manana tondro LED roa izahay, iray amin'ny faritra afovoany miaraka amin'ny Sensor IR ho an'ny lavitra izay hampandre antsika ny fanovana fanovana, ary koa ny mari-pamantarana hetsika ho an'ny mikrô any ankavanana. Mijanona eo afovoany afovoany ny fifehezana haino aman-jery ary ny mikrô izay misy ny LED manokana.
Mandeha any amin'ny faritra hafa isika izay tsy isalasalana fa mampatsiahy antsika ity Sonos Arc ity fa a vokatra isan-karazany premium, Andao hojerentsika izay ananantsika ao anatiny:
Woofers elliptical 8
Mpanamboatra kilasy 11.
Na izany aza, manana ihany koa izahay atidoha hanetsika izany rehetra izany:
QuadCore 1,4GHz CPU A53 maritrano
1GB fitadidiana SDRAM
4GB NV fitehirizana
Ny valiny dia araka ny nampoizina, mifanentana amin'ny Dolby Atmos sy Dolby True HD. Mazava ho azy fa efa fantatsika ny antony hafa amin'ny fividiananao:
Ho an'ny fifandraisana Tsy hanadino na inona na inona mihitsy izahay, manasongadina ny mpanova audio optika ho an'ny HDMI 2.0 izay tafiditra ao anaty fonosana:
HDMI 2.0 miaraka amin'ny teknolojia ARC sy eARC
Fampidirana optika (navadika ho HDMI)
Fifandraisana Ethernet 45/10 RJ100
802.11bg WiFi tarika WiFi roa
Mikraoba lavitra 4
Feo: namoaka ny tongony indray i Sonos
Manana fehezam-peo 5.1 izahay Azontsika atao koa ny manamboatra toy ny rafitra manodidina, toy ny tranga misy antsika. Nampiasa Sonos Arc izahay ambanin'ny fahitalavitra sy Sonos Ones roa ho fanohanana ao ambadiky ny sofa. Tokony hohamafisintsika fa mila fahitalavitra misy HDMI ARC / eARC isika mba hahafahantsika mamintina ny mety, satria raha tsy misy an'ity fifandraisana ity dia ho very ny saika rehetra.
Ny Sonos Arc dia mamaritra ny zavatra havoakany ary manodina azy tanteraka, Ny valiny dia tsy very ny fifanakalozan-kevitra, mazava tsara amintsika ny feo, na ny fihainoana mozika na amin'ny sarimihetsika.
Tsy mijaly izany raha mampiakatra ny haavony ho avo, ary ny hira misy be pitsiny toa an'i Queen's Bohemian Rhapsody dia ahafahantsika manavaka mora foana ireo feo, zavamaneno ary firindrana rehetra. Io no fotoana ahatsapantsika faingana fa teo alohantsika isika ny fantsom-peo miaraka amina sehatr'asa mahery indrindra izay efa nandalo ny tobin'ny andrana anay.
Na dia, ny hany «fa» izay mety ho hitantsika dia ny basika, na dia azontsika atao aza ny manamboatra azy amin'ny EQ, mazava ho azy fa tsy miteraka ny vokan'ny "Wow" sisa amin'ny firindrana. Izy ireo dia tsara, mafy ary be totohondry, fa tsy amin'ny ambaratongan'ny fahatsarana hatolotrao amin'ny Sonos Sub.
Ny sanda fanampiny: Fanamboarana sy fanaingoana
Miresaka momba ireo fanitsiana kely ataontsika isan'andro izahay rehefa mahafantatra bebe kokoa ny vokatra. Eto ny alin'ny sarimihetsika, ny tolakandron'ny baolina kitra sy ny fialantsasatra. Ity Sonos Arc ity dia ahafahantsika mankafy ny feony Dolby Atmos nefa tsy mitarika ny hatezeran'ilay mpifanolobodirindrina amintsika, mifalifaly mijery ny fandresen'ny ekipanay ary na dia manipy ny fety amin'ity taonjato ity any an-tranonao aza ianao, dia manana ny fikirakirany avy:
Sound alina: Ity fomba ity dia hahafahantsika mametra ny feo toy ny fipoahana sy mozika mafy avy amin'ny sarimihetsika nefa tsy very atiny kely akory. Tena mandaitra tokoa izy io.
fanatsarana de fifanakalozan-kevitra: Imbetsaka ny feo na mozika ao ambadika dia mety hanelingelina ireo fifanakalozan-kevitra amin'ny sarimihetsika sasantsasany, izay fantatr'i Sonos tsara ary omaniny ity fomba ity izay tsy hahavery ilay script.
Ankoatra izany, ny fampiharana S2 dary ilay resahantsika HERE, misy tsotra nefa mahomby mampitovy izay hampifanaraka ny feo amin'ny tsirontsika.
Mpanampy virtoaly sy serivisy hafa
Ny fanampim-panazavana tsara amin'ny Sonos Arc dia ny tsy fitovizantsika tanteraka amin'ireo mpitantana telo lehibe amin'ny trano manan-tsaina: Apple HomeKit (AirPlay 2), Amazon Alexa ary Google Assistant. Nanazava taminay tamin'ny fotoana hafa izahay ny amin'ny fomba hifehezana ny tranonao nomerika miaraka amin'i Sonos, ary ny traikefa ananan'ity Sonos Arc ity dia miankina amin'ny asa.
Raha vantany vao nampiana ilay mpanampy virtoaly tadiavina, amin'ny tranga misy anay Amazon Alexa, Ny mikrôfony lava efatra dia mamela antsika hanao hetsika isan'andro tsy misy sakantsakana, na dia nilalao votoaty be aza ny Sonos Arc:
Play mozika amin'ny Spotify
Alefaso ary vonoy ny jiro marani-tsaina
Tantano ny atiny TV ary ampodio ary vonoy
Ianao no mamaritra ny fetra amin'io lafiny io. Ny fampiharana S2 hitantsika teo aloha (HERE) efa nampianatra antsika ny mahavita azy. indrindra nankafy ny Spotify Connect, Apple Music ary Sonos Radio izahay miaraka amin'ny hatsarana mitovy hatrany.
Sintomy ny Sonos ho an'ny Android
Sintomy ny Sonos ho an'ny iOS
Ny hevitry ny tonian-dahatsoratra sy ny zavatra niainan'ny mpampiasa
Manana zavatra kely holazaina momba ity Sonos Arc ity isika, tsy maintsy hisalasalana fa ny mpifaninana dia mikapoka ao anaty bara feo, Manana ny fahaizany miovaova, feo isan-karazany premium, fifandraisana ary endri-javatra marani-tsaina. Sonos dia nanandrana indray ny bara fanamafisam-peo miaraka amin'ny Arc-ny ary ho mafy ny hanery azy ireo hijoro amin'izany. Raha tianao io dia azonao atao ny mividy azy HERE avy amin'ny € 899, na amin'ny tranokala ofisialin'ny Sonos.
Famolavolana minimalista, avo lenta ary marina, dia toa tsara foana
Feo isan-karazany premium, hatsarana tsy misy bebe kokoa
Fifandraisana avo sy fampiasa fanampiny miaraka amin'ny fampiharana S2
Ny bas, izay sisa tavela amin'ny ekipa tena tsara dia mampahatsiahy antsika fa tsy maninona ny mividy Sonos Sub
Ny vidiny dia mety mahasakana ny sarambaben'olona
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Sonos Arc, rehefa tonga amin'ny endrika bara ny fahatsarana
Arovy ny fizahanao amin'ny Internet amin'ny NordVPN amin'ny fotoana rehetra
Ahoana ny fomba hiantsoana nomerao miafina amin'ny mpandraharaha rehetra